बागलुङको ग्वालीचौर र गुल्मीको पौदी अमराई जोडने वालुवा पुलको उद्घाटन ! – ebaglung.com
बागलुङको ग्वालीचौर र गुल्मीको पौदी अमराई जोडने वालुवा पुलको उद्घाटन !
२०७३ फाल्गुन १२, बिहीबार २१:०१	Top News, प्रमुख समाचार
टोपलाल अर्याल, बागलुङ/गुल्मी २०७३ फागुन १२ । बाग्लुङको ग्वालीचौर र गुल्मीको पौदी अमराई जोडने वालुवा पुलको नेकपा एमालेका सचिव तथा गुल्मी क्षेत्र नं ३ का सांसद गोकर्ण बिष्टले उद्घाटन गरेका छन् । २०७२ साल पुष महिनाबाट निर्माण थालिएको ७१ मिटर झोलुङ्घे पुलको बिष्टले उद्घाटन गरेका हुन् ।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै बडीगाड खोला वारी र पारी रहेको गुल्मी र वागलुङको सम्बन्ध पुलले एकैठाउँ बनाएकोमा खुसी प्रकट गरे । उनले तत्कालका झोलुङे पुलबाट जनजीवन सहज बनाएको बताउँदै केहि बर्षमा पक्की पुल पनि निर्माण गर्ने बताए ।
उनले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जनताको भावना र इच्छा अनुसारकै विकासलाई अगाडी बढाएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले जिल्लाका धेरै योजनाहरु फोनकै भरमा पारेको बताउँदै तत्काल आउने समस्यालाई अलि छिटो आफुलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे ।
बडीगाड खोलाको जोखिममा परेको भुवाचिदी बजारको अनुगमन
यसैवीच नेकपा एमालेका सचिव तथा साँसद बिष्टले गत बर्ष बडीगाड खोलाले कटान गरी बजारनै जोखिममा परेको कुर्घा ५ को भुवाचिदी बजारको अनुगमन गरेका छन् । उनले बजार नजिक क्षेति पु¥याएको स्थानमा अवलोकन गर्दै बर्षा अघिनै तटबन्द गर्ने कुनै न कुनै योजनाको लागी पहल गर्र्ने बताए ।
उनले बाढीले बजार जोखिममा पु¥याएको अवस्थाका बारेमा आफुलाई आज सम्म कसैले जानकारी नदिएको गुनासो गर्दै अन्तिम अवस्थामा भएपनि बाढीबाट सुरक्षित रहने उपाय खोजिने बताए ।
गएको बर्खामा बढिघाट खोलाको बहाव उच्च भएपछि भुवाचिदी बजारका झण्डै एक दर्जन घरहरु उच्च जोखिमा रहेको स्थानीय शिक्षक सुकदेव रिजालले बताए ।
गत बर्ष कुर्घा गाविस ९ की गीता तामाङको २० लाख बराबरको खेत, पुर्णलाल आचार्यको खेत खोलाले कटान गरेर लगेको थियो । त्यस्तै बाढि बस्तीमा पस्न थालेपछि हर्क थापा, राम प्रसाद खरेल, गोमा खत्री, नरहरी सापकोटा, नर बहादुर थापा, राम सुनार, गोपाल रायमाझी लगायतको घर जोखिममा परेको एमाले नेतृ कमला शर्माले बताइन् । अर्को बर्खामा आफुहरु बच्नकै लागी डाँडो खोज्दै हिड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै नेता बिष्टलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन् । स्थानीय अगुवा एवं सरोकारवाला सहितको टोलीले खोलाले बजार कटान गरेको क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरको थियो ।
यस्तै एमाले नेता विष्टले कुर्घा गाविसको खडग प्राविको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । उनले खडग प्राविमा अक्षयकोष स्थापना विभिन्न सहयोग गर्ने चन्दादाताहरुलाई सम्मान गरेका थिए । त्यस्तै बिद्यालयको शैक्षिक एवं भौतिक विकासको निम्ती आफुले जस्तो सुकै पहल गर्न सहयोग गर्ने नेता बिष्टले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै भर्खरै भवन निर्माण गर्दै गरेको शारदा बिद्या मन्दिर वामीको पनि अनुगमन गरेका थिए । अगुगमनका क्रममा सांसद बिष्टले बिद्यालयको भवन भुकम्पले भत्काएको तथा बिद्यार्थी अनुसारको भवन नभएकाले थप कोठा र बिद्यालयको भवन पुर्ण बनाउने गरी आफुले सहयोग गर्ने बताए ।
त्यस्तै बिद्यालयका समस्याका बारेमा भवन निर्माण समिति र बिद्यालयले नेता बिष्टलाई ज्ञापन पत्र पनि दिएको छ । यसैबिच वागलुङ र्खबाङ बजारका स्थानीयले बडीगाड खोला र दरम खोलाले आफुहरुलाई जोखिममा पारेको भन्दै तटबन्दको लागी केन्द्रमा पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीयहरुले बर्खामा ढुक्कका साथ सुत्ने वातावरण मिलाईदिन नेता बिष्टको ध्यानाकर्ष गरेका थिए ।
जलजलामा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य एमालेमा प्रवेश
नेकपा एमाले जलजला गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रता भेलामा नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला सचिवालय सदस्य प्रेम गलामी सहित डेढ सय जना एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य झविन्द्र बुढाथोकी सहितका नेता तथा कार्यकर्तालाई नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद गोकर्ण बिष्टले एमालेमा प्रवेश गर्ने सवैलाई दुई घण्टा लगाएर स्वागत गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा पार्टी परित्याग गरि ठुलो संख्यामा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । उनले आफु सिंगो एमालेको नेता भएकाले जलजला गाविसको विकासको लागी कुनै कन्जुस्याँइ नगर्ने बताए । साथै उनले गाउँ कमिटीलाई नव प्रवेशीहरुलाई संगठनमा एकताबद्ध बनाएर राख्न निर्देशन दिए ।
निसि भुजि जनता क्याम्पस : पुरानै व्यवस्थापन समितीलाई निरन्तरता !